Zvimwe Zviwanikwa - Prairie State Legal Services
ILLINOIS YEMAHARA DZIDZO PASI
Illinois Legal Aid Online inopa vagari veIllinois ruzivo rwevashandisi-runoshanda, zvekudzidzisa uye mafomu, zviwanikwa zvekubatsira, uye zvimwe zvinhu zvinoenderana. Ikoko, iwe unogona kuwana ruzivo nezve ako epamutemo kodzero uye mabasa, kuendeswa kune emahara uye akadhura emahofisi erubatsiro emutemo, uye mafomu uye mirairo yekuzvimiririra iwe.
Please shanyira illinoislegalaid.org mamwe mashoko.
KUZVIZVIBATSIRA MAZVIMBO MU ILLINOIS
Matare mazhinji ane "Self-Help Centres," uko veruzhinji vanogona kuwana mahara ruzivo rwechokwadi uye rwazvino rwemutemo rwavanoda. Vamwe vevava vane vafambisi vechikepe kana vamwe vashandi vanogona kukubatsira kuti uwane ruzivo rwakakodzera. Nekuwana mukana kune urwu ruzivo, vanhu vasina magweta vanokwanisa kutsanangura nyaya yavo zvinobudirira kumutongi uye kugadzirisa matambudziko avo epamutemo vari vega. Nzvimbo zhinji dzekuzvibatsira dzinowanikwa mudare redzimhosva, asi mamwe ari mumaraibhurari - tinya chinongedzo pazasi kuti uwane nzvimbo yekuzvibatsira munharaunda yako.
Dzvanya apa kuti uone runyorwa rweZvibatsiro Zvekubatsira.
DZEMAHARA DZEMAHARA CORPORATION (LSC)
Iyo Legal Services Corporation (LSC) inobhadharwa pachena, 501 (c) (3) isingabatsiri mubatanidzwa yakatangwa neUnited States Congress. Inotsvaga kuverengera kuwana kwakaringana kururamisiro pasi pemutemo kune vese maAmerican nekupa mari yehurumende rubatsiro rwemutemo kune avo vangazotadza kuiwana. LSC yakagadzirwa muna 1974 ine bipartisan congressional sponsorship uye inobhadharwa kuburikidza nehurongwa hwekongiresi.
Please shanyira lsc.gov/what-legal-aid/find-legal-aid kuwana rubatsiro rwemunharaunda yako.
RUDZIDZISO RWEZvenyika RUDZIDZO & DEFENDA SANGANO (NLADA)
NLADA isangano rekaresa uye guru reAmerica risingabatsiri rinozvipira kuita basa rekupa mutemo kune avo vasingakwanise kupa mazano. Ivo vanopa kurwira, kutungamira, ruzivo, kudzidziswa uye nerubatsiro rwehunyanzvi kunhengo dzenzvimbo yekutonga yakaenzana, kunyanya avo vanoshanda mukudzivirira kwevanhu nerubatsiro rwemutemo.
Please shanyira nlada.org/about-nlada kuti udzidze zvakawanda